BTK njanji yekufambisa pakati peTurkey neRussia inokosha kune imwe nzira | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraBTK njanji pakati peTurkey neRussia kune Imwe nzira yekufambisa Yakakosha
22 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Railway, GENERAL, musoro wenyaya, TURKEY
gurukota rezvekutengeserana pekcan yakasangana neanvak, russia simba gurukota
Gurukota rezvekutengeserana, Ruhsar Pekcan vakasangana na Co-sachigaro weTurkey-Russian Intergovernmental Joint Economic Commission (KEK) uye Energy Minister weRussian Federation Aleksandr Novak. Pekcan, mumusangano wakaitwa nenzira yevideoconferencing uye nhume dzakapinda muchirongwa, vakataura kuti chiyero mukutengeserana kwenyika uye kushandiswa kwemari dzemuno kunofanirwa kuwedzerwa.
Panguva yemusangano wePurukota Pekcan naNovak, Mutevedzeri weGurukota rezvekutakura, VaSelim Dursun, Ministry of Agriculture and Forestry, Energy and Natural Resources uye Central Bank makomendi akaverengerwa muhurumende yeTurkey. Padivi reRussia, pamwe negurukota, VaNecak, Mutevedzeri weGurukota rezvemagetsi Anatoli Yanovski, Dzobudiriro Yezvehupfumi, Ehupfumi, Masangano ezvekufambisa, MaCustoms nevakuru veCentral Bank vaivepo.
Mumusangano wakaitwa pamwe nevhidhiyo musangano wehurongwa, nyaya dzakanangana nekuzivikanwa uye gadziriso yezvipingamupinyi pakutengeserana, zvinoenderana nehukama hwehukama hwehukama pakati penyika mbiri idzi, dzakakurukurwa, kunyanya munguva yakaoma yenyika nekuda kwemhando nyowani yekoronavirus (Kovid-19) denda.
Pamusoro pezvo, matanho ekuwedzera uye kufambisa kutengeserana, kushandira pamwe pasimba, kutengeserana kwezvekurima uye zvekufambisa ndizvo zvezvimwe zvezvinhu zvakatanga kuita zvirongwa kuitira kuti asvike pakanangana nemabhiriyoni zana emadhora ehuwandu hwekutengesa hwakagadzwa nevakuru veenyika mbiri.
Munguva yemusangano, kudiwa kweTurkey kwakatsikiswa kuti kubviswa kwezvipingamupinyi pakuwedzera kutumira kuRussia.
Ndichiri kuongorora nyaya dzemagetsi, inova chikamu chehukama hweTurkey-Russian kutengeserana uye hupfumi, nhanho dzinofanirwa kutorwa yekuisa chikamu chekutanga cheAkukuyu Nuclear Power Plant Project mukushanda muna 2023 yakakurukurwa.
Kunzwisisirana kwakanzwika nezve zvigadzirwa zvekurima, chinhu chakakosha mukutengeserana kwenyika mbiri idzi.
Inoshanda kuTurkey chete neRussia nePekanhi ichitaura kuti chero nguva uye kuti kudiwa kwekutakura paine hwaro hwunotungamira kumatambudziko makuru uye kusagadzikana nekuda kwekushomeka kwetomota quota application, mitemo yekutengesa yepasi rese inoda nezvekushandiswa kwese ikataura kuti zvinopesana nemweya wekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. iye.
Pekcan akataura kuti maitiro emakambani ekuTurkey akamirira kubvumidzwa kuti aiswewo mumakambani emakambani anotenderwa kuendesa mhuka kuRussia anofanira kuzadzikiswa pasina kunonoka.
Kutakura kwepasi rose kunogadziriswawo
Mumusangano uyu, uko kune mafambiro ezvekufambisa nedzimwe nyika, izvo zviri pakati pezvikamu zvakabatwa zvakanyanya nekubuda kweKovid-19, zvakare zvichiongororwa, Pekcan akataura kuti kukosha kwekukosha kwemigwagwa kwawedzera zvakanyanya uye kutengeserana nenyika dziri mudunhu hakugadzike nehuwandu hwenzvimbo dzisingabvumirwe.
Makurukota Pekcan, kunyanya vachisimbisa kukosha kwekuwedzera nzvimbo yavo yepamhepo uye yekufambisa yemigwagwa neRussia, Turkey uye mamiriro aripo muBaku-Tbilisi-Kars njanji njanji inogona kuve yakakosha imwe nzira yekufambisa pakati peRussia, nepo nzira yegungwa yekufambisa imwe yezviteshi zviteshi yakaoneka kuTurkey yekufambisa. Akataura nezve kukosha kwekuchibvisa nekukurumidza uye kuita ese akajairwa Ro-Ro ndege.
"Kutengeserana nemari dzemuno kunofanirwa kuwedzerwa"
Nekune rumwe rutivi, Pekcan akacherekedza kuti musangano unofanirwa kudzikamisa kutengeserana kwemapato uye kuwedzera kushandiswa kwemari dzemuno.
Mumusangano uyu, Turkey-Russian Joint Economic Commission (KEK), iyo basa rayo rakamiswa nekuda kweKovid-19, yakaitwa mukota yekupedzisira yegore rino. Chibvumirano chakasvikwa kuti chiitwe muSt.
Izvo zvakabvumwa kupedzisa misangano yeVatengesi, Investment uye Regional Cooperation, Energy, Zvokufambisa mapoka mukati memutumbi weKEK munaJune, uye kugadzira kongiri yekupindura mazano uye marongero ebasa achapihwa kune KEK emubatanidzwa pamwe nekupedza basa reamwe mapoka anoshanda kusvika muna Nyamavhuvhu.
kutengeserana kwekunze pakati peRussia neTurkey
Kutengeswa kweTurkey kuenda kuRussia muna 2019 kwemadhora zviuru zvina zvemadhora, nepo kunze kwenyika kubva munyika idzi kwakaonekwa semadhora zviuru makumi maviri nezvina zvemadhora.
Gore rino rechina chikamu che4 kubva muzana cheTurkey chinotumirwa kuRussia chakawedzera kusvika pamabhiriyoni mazana maviri emadhora. Munguva imwe chete iyoyo, zvicherwa kubva kuRussia zvakadzikira ne7,5 muzana kusvika pamadhora mazana matanhatu nemazana matanhatu.
Makambani anoshanda muchiTurkey aita zviuru zviviri makumi maviri nezvisere zvemadhora akakosha pamakumi mapfumbamwe nemazana masere emadhora emadhora kuRussia kusvika zvino. Russian yekudyara zvakananga kuTurkey kusvika kumamirioni mazana matanhatu emadhora, nepo iyo kambani, mari yekudyara yakananga yemakambani eTurkey munyika idzi yapfuura bhiriyoni imwe chete yemadhora.
TCDD Yekufambisa yakasaina Protocol yeTrans-Caspian Transportation
BTK yakazadzisa chisungo chakakosha cheketani yakakosha nechitima
Rakadhindwa muGavhidhiyo! Izvo zvinotakura zvichaitwa nechitima.
BTK Railway kuti ive yeimwe nzira yeAzerbaijan Economy
BTK Railway Alternatives Pakutenga neRussia
BTK Railway Project nehope, zuva raitika
BTK njanji mutsetse kuchawedzera zvokutengeserana pakati Kazakhstan uye Turkey
Vakasaina vakakandwa muvira BTK njanji pakati Turkey Uzbekistan Cooperation
Iva Chinokosha Future Centers Intermodal Transport muTurkey
Motokari Yekutakura Pakati peEstonia neRussia
Between Railway mitoro Transport Target Iran ari Million matani Gore negore ne Turkey
Kubatana pakati peTurkey neRussia Covidien-19 Vaccine
An chirongwa chinokosha panyaya kweTurkey uye URAYS Eskisehir
chigadzirwa chemhuka kunze kwenyika
Turkish-Russian Intergovernmental Yakasanganiswa Ehupfumi Commission
BTK Railway Line inotakurwa 26,5 Mamioni Mamiriyoni egore
BTK Railway line ndiro basa repasi
BTK rairi purogiramu yomugwagwa mumugwagwa mukuru
Kars ichachinja muchina China neBTK railway